UAE-yakasungwa ndege dzekutengesa dzeIsrael dzakabvumidzwa kuyambuka Saudi Saudi spacespace
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » UAE-yakasungwa ndege dzekutengesa dzeIsrael dzakabvumidzwa kuyambuka Saudi Saudi spacespace
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Israel Breaking News • nhau • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Hurumende yeSaudi Arabia yakabvuma zviri pamutemo kurega ndege dzekutengesa muIsrael dzichipfuura nendege dzadzo dzichienda kuUnited Arab Emirates (UAE).
Chibvumirano chakaitwa neMuvhuro manheru, kwasara maawa mashoma kuti ndege yekutanga yekutengesa yeIsrael pakati peTel Aviv neDubai yakarongerwa Chipiri mangwanani. Iyo Israir Airlines nendege yakaisa pangozi kudzimiswa pamberi peSaudi Arabia isati yapa mvumo yekutsvaga kwenguva yakareba kuIsrael, sekureva kwenhau dzeIsrael.
Sekureva kweIsrael TV network, chibvumirano ichi chaingove chakanakira mazuva mana anotevera uye chaingovhara ndege kuenda kuDubai.
Izvo hazvina kunyatso kujeka kana iyo mvumo yakapihwa kune anotakura eIsrael El Al, iyo yakagadzwa zvakare kuvhura dzinowanzoitika nendege kuenda kuUAE mwedzi unouya.
Mumwe mukuru wezita reIsrael asina zita, asi akazivisa nezvenyaya iyi, akati paive ne "green green", asi zvimiro zvacho zvainge zvisati zvarongwa.
Ndege dzakananga idombo rekumisikidza madhiri iyo Tel Aviv yakasvika nguva pfupi yadarika neUAE neBahrain.
FlyDubai yakashandira yekutanga yekushanya nendege kubva kuTel Aviv kuenda kuDubai kutanga kwaNovember, iine vamwe 174 vezvemabhizimusi uye vashanyi panhoroondo nendege FZ8194 pamusoro peSaudi airspace.
Rondedzero yenzvimbo dzipi dziri kuvhurwa muBangkok nekuda kwe ...
Shanghai inozivisa chirongwa chekuvandudza kwekushanya kwe2021-2025
Royal Caribbean Boka rinodana Nyowani Chief Environmental ...